Blog - Nhare Spy
September 22, 2021 Leave mhinduro Nhare dzinosora
September 22, 2021 Jeff Tinklet Nhare dzinosora
Zita rangu ndinonzi Jeff Tinklet, pamwe nekuwedzera ndiri ivo vanotungamira…
Ini zita rangu ndinonzi Jeff Tinklet, pamwe nekuwedzera ini ndiri mutungamiri wevatengesi wechigadzirwa net pamwe nekuwedzera rubatsiro rwevatengi kubatanidza paPhone Spy. Kunetseka 40% yevechiri kuyaruka vanoshandisa nharembozha kutumira mameseji ezvepabonde meseji pamwe neMMS (Multimedia Messaging Service) kune vamwe vazhinji vechidiki.
Ingori 16% yevaridzi vezvivakwa vanochengetedza yavo Wi-Fi router
September 21, 2021 Jeff Tinklet Nhare dzinosora
Kupfuura 64% yedzimba dzine Wi-Fi router mumhuri, zvisinei 16% chete inoita chero chinhu kuvadzivirira, zvinoenderana neruzivo kubva kuNordVPN. Izvi zvinoshungurudza sezvo mavhavha anowanzo tarisa mairaira edzimba mukubiridzira phishing kunosanganisira kumwe kurwisa kwakadai kare gore rino kushandura marongero eDNS kudzosera vakakuvara ku
TOP 3 Yakanyanya Yakavanzika Spy Apps yeapuro iphone * 2021 *.
September 21, 2021 Leave mhinduro Nhare dzinosora
. Spy maapplication eapuro iphone akanyatsoita chaizvo chaizvo zvekutevera mwana wako, kana mushandi pamwe neyako nhare mbozha. Nekuchengeta iko kunyorera kwePhone, iwe unowana mukana wekutarisa pane ese mameseji, mafoni, pamwe nekutarisa nhoroondo parunhare. Chii
5 Zviratidziro Zvekubiridzira Sweethearts Kuti Izvo Zvizhinji ZveMurume Kupotsa
September 20, 2021 Jeff Tinklet Nhare dzinosora
. Kuziva kunze kwekunge iwe uine asina kutendeka mudiwa kana kuti kwete iri rimwe rebasa rekuongorora. Izvo Zviratidzo zvishanu zveasina Kutendeka Mudiwa. 5) Iye Anogara Ari Hectic. Izvi ndezvimwe zvekutanga zvinoratidza kubiridzira izvo zvinopa yakakosha tip kuti ari kubiridzira. Izvi zviri zvimwe zvezviratidzo zvekutanga zvehupombwe